एप्पल शुरू गर्‍यो ... एक फोन। के अरु कोही डुब्दै छ? | Martech Zone
एप्पल शुरू गर्दछ ... एक फोन। के अरु कोही डुब्दै छ?
मङ्गलबार, जनवरी 9, 2007 शनिबार, अक्टोबर 20, 2018 Douglas Karr
तपाईलाई हुनसक्छ वा थाहा नहुन सक्छ कि म भर्खरै काममा एक म्याकबुक प्रो मा सरे। म यससँग खुसी छु, यो प्रभावशाली छ। ओएसएक्स महान छ ... तर मँ अझै क्रेश अनुप्रयोगहरू छ र मसँग अझै समस्याहरू थिए। म यसको साथ यति माया गर्दिन कि मेरो घरका सबै म्याक छन्। मसँग एउटा G4 छ र मेरा बाँकी कम्प्युटरहरू XP चालू पीसीहरू छन्, साथै बफेलो लिंकस्टेशन चलिरहेको लिनक्स।
के म संसारमा एक्लो मान्छे हो कि एप्पलले फोन निर्माण गरेकोमा वास्तवमै प्रभावित छैन? यो एक फोन व्यक्ति हो! 'क्रान्तिकारी' जस्ता सर्तहरू प्रयोग भइरहेको छ। क्रान्तिकारी? साँच्चै? म के छुरहेको छु यो मात्र फोन ०.० होइन?
सुविधाहरूको सूची तल जानुहोस् र मलाई भन्नुहोस् म कहाँ गल्ती गर्छु:
मानक कीपैडको सट्टा, आईफोनले पेटन्ट गरिएको एप्पल टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ "मल्टि-टच"। यसले स्टाइलस प्रयोग गर्दैन, "बहु-औंला इशाराहरू" छ र अनावश्यक टचलाई बेवास्ता गर्ने दावी गर्दछ। कार्यहरूले यसलाई दुई अन्य क्रान्तिकारी एप्पल UIs - Macintosh मा माउस र आइपडमा क्लिक व्हिलसँग तुलना गर्नुभयो।
राम्रो, तिनीहरूले एक टच प्याड सुधार।
Virtual. inch इन्च टचस्क्रीन भर्चुअल किबोर्डको साथ।
वाह, ठूलो स्क्रीन। मसँग पहिले नै मेरो फोनमा 'भर्चुअल किबोर्ड' छ।
आईफोन ओएस एक्स चलाउँछ, एप्पल को मानक अपरेटिंग प्रणाली; ईन्गेजेटको शानदार कभरेजका अनुसार: "यसले हामीलाई डेस्कटप क्लास एप्लिकेसनहरू र नेटवर्किंग सिर्जना गर्न दिनुहोस्, प्रायः फोनहरूमा तपाईंले फेला पार्ने अप्ठ्यारो चीज होइन, यी वास्तविक डेस्कटप अनुप्रयोगहरू हुन्।"
म 3.5.″ ″ स्क्रिनमा इलस्ट्रेटर चलाउन सक्छु? हो! के यो २ जीबी र्यामको साथ आउँछ?
आईट्यून्सको साथ सिंक गर्दछ: "आईट्यून्सले तपाइँको सबै मिडियालाई तपाइँको आईफोनमा सिnc्क गर्न गइरहेको छ - तर डेटाको एक टन। सम्पर्कहरू, क्यालेन्डरहरू, फोटोहरू, नोटहरू, बुकमार्कहरू, ईमेल खाताहरू ... "
हो, त्यो पनि मेरो फोनको साथ, अब भयो।
एप्पलको डिजाइन चपहरू सबै आईफोनमा छन्: "3.5.-इन्च स्क्रीन, उच्च रिजोलुसन स्क्रिन जुन हामीले कहिल्यै पठाएको छ, १pp० पीपीआई। त्यहाँ एक मात्र बटन छ, "घर" बटन […] कुनै स्मार्टफोन भन्दा पातलो… ”
उत्तम ... छिटो… बलियो… यो $ B बिलियन फोन हो।
२ मेगापिक्सेल क्यामेरा भित्र निर्मित
हो, बुझें। र मेरो फोनले भिडियो र अडियो पनि गर्दछ।
उत्कृष्ट मिडिया सुविधाहरू - तपाईंको संगीत, वाइडस्क्रिन भिडियो, एल्बम कला, भित्री निर्मित स्पिकर मार्फत स्क्रोल गर्नुहोस् ...
केहि पनि भयो। ″.? डिग्री वाइडस्क्रीन हो? को लागि, एक पिसो?
तपाईंको पीसी वा म्याकको साथ तपाईंको आईफोन सि with्क गर्नुहोस् (सम्पर्कहरू आदिको लागि)
मानक फोन सुविधाहरू - एसएमएस, क्यालेन्डर, फोटोहरू, आदि। फोटोहरूको साथ एक मोशन सेन्सर छ जुन फोटोहरू घुमाउँदछ जब तपाईं फोन खोल्दा।
मेरो स्क्रिन घुमाइन्छ जब म कुञ्जीपाटी स्लाइड गर्छु। ठीक छ ... तपाईंले मलाई पाउनुभयो ... गति सेन्सरहरू मीठा छन्।
मीठो भ्वाइस टु टेक्स्ट भनेको मलाई चाहिएको कुरा हो जब म राजमार्गमा मेरो भ्वाइसमेल जाँच गर्दैछु! रेलिंगमा दौडँदा म दुई औंलाले स्क्रोल गर्न सक्छु!
रिच HTML ईमेलहरू - कुनै IMAP वा POP3 ईमेल सेवाको साथ काम गर्दछ। यो ब्ल्याकबेरी को लागी समस्या हो!
मेरो त्यो गर्छ।
सफारी ब्राउजर आईफोनमा चल्छ - "यो सेलफोनमा पहिलो पूर्ण प्रयोगयोग्य ब्राउजर हो।" कार्यहरूले आईफोनमा NYT चालु देखाउँदछ - वास्तविक वेबसाइट, एक पनी WAP संस्करण होईन।
Shenannigans! म ओपेरा मोबाइल चलाइरहेको छु र यो 'पूर्ण प्रयोगयोग्य' छ।
एक ब्राउजर र इन्टरनेट जडानको साथ ... हो, म त्यो पनि गर्छु। अवश्य पनि स्क्रिनको अतिरिक्त ईन्चले मलाई मेरो बाटो सजिलो फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
विजेटहरू निर्बाध इन्टरनेटमा जडान गर्नुहोस् (वाइफाइ र EDGE मार्फत)
त्यसैले म मौसम जाँच्न सक्छ जब म काममा हिंडिरहेको छु! ओह ... एक सेकेन्ड पर्खनुहोस् ...
याहूबाट नि: शुल्क "पुश" IMAP ईमेल
मलाई थाहा छ कि म यस बारे flippant हुँ, तर म यो प्राप्त गर्दिन। जस्तै लाग्छ धेरै एक फोन अपग्रेडको लागि hype को, यो छैन?
त्यो खराब केटोमा भिडियो कनेक्टिभिटीमा ब्रॉडब्यान्ड भिडियो फाल्नुहोस् र यो स्टार ट्रेक गीक छतमा हिट हुनेछ। यसको बिना, यद्यपि यो केवल हो ... हिम्मत म भन्न चाहन्छु ... एक फोन।
त्यसो भए, एप्पलले टिभी सुरू गर्‍यो? उम्म…।
PS: बिललाई विशेष माफी माग्दै… ऊ आफैं पछाडिको थियो आज खाजामा मुछ्ने र पहिले नै हिसाब गर्दै कि उसले कति वर्षको अवकाशको एक वर्ष किन्नुपर्दछ कि उसले एउटा किन्नुपर्दछ। मेरो मतलब तपाईको बिललाई अपमान गर्ने होइन, तर यो फोनकोलागि राम्रो मार्केटिंग hype हो।
टैग: स्याऊएप्पल आईफोनiphone
जनवरी 10, 2007 मा 12: 40 एएम
म अझै क्रान्तिकारी .. र को लागी प्रतिक्षा गर्दैछु एप्पलस 🙂 🙂
जनवरी 10, 2007 मा 3: 01 एएम
मैले भर्खर आईपड भिडियो र उपकरणहरूमा $ 400 खर्च गरें ताकि म आईफोन किन्न खोजिरहेको छैन। केहि मानिसहरु आईफोन लाई माया सक्छ, तर म फोन र एमपी3प्लेयर को लागी छुट्टै उपकरणहरु को लागी प्राथमिकता दिनुहुन्छ कि "कुनै पनि को सबै ट्रेड मास्टर को जैक" हुन सक्छ।
जनवरी 10, 2007 मा 6: 38 एएम
मलाई लाग्छ कि आईफोन बाहिरको चीज यसको सरलता हुनेछ। म अब फोनको एक गर्व नभएको मालिक हुँ कि सम्भवतः यो सबै गर्दछ। तर तपाईले धेरै बटनहरू धकेल्नु पर्छ (र त्यहाँ छन् धेरै ती मध्ये), कि यो मात्र मलाई बाहिर राख्छ। क्र्यासहरू सबै समय। कुनै साधारण सिnch्किing छैन (हे, आज सम्म म यसलाई ओएसएक्ससँग सि with्क पनि गर्न सक्दिन)। बग्गी
त्यसो भए, हो, प्रत्येक एकल फिचर आफैंमा त्यस्तो खास नहुन सक्छ, तर ती तथ्यहरू जुन ती एप्पलद्वारा मिल्दछन् मलाई आशा छ कि त्यहाँ एक पीडीए फोन हुन सक्छ जुन वास्तवमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सरलता मेरो लागि शब्द हो।
म surprized कि तपाईं OSX मा क्र्यास अनुभव। म मेरो म्याक्स मा धेरै मांग भिडियो रोजगार चलाउँछु, र धेरै दुर्लभ क्र्यासहरू हुन्छु। सायद एक हप्ता - र त्यसपछि पनि मलाई पुनःसुरु गर्न आवश्यक पर्दैन। के तपाइँ धेरै तेस्रो पार्टी प्लग-इनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ?
अस्वीकरण: म करीव Mac Macs of को एक धेरै खुसी मालिक हुँ
जनवरी 10, 2007 मा 8: 32 एएम
म कसैलाई पनि म दुःखी एप्पल ग्राहक हुनुहुन्छ भनेर सोच्न चाहन्न। सबै प्रकारले, म मेरो म्याकबुक प्रो मन पराउँछु। दुःखको कुरा, यसले प्रायः मेरो पक्ष कहिल्यै छोड्दैन! '' सरलता 'मा तपाईंको पोइन्ट मैले अहिले सम्म अनुभव गरें। मँ वास्तवमा फोनमा सबै hype मा अचम्म मा लिएको छु!
मैले स्पष्ट गर्नु पर्छ ... म कहिले पनि OSX क्र्यास गरेको छैन, केवल केहि कार्यक्रमहरू चलिरहेको छ।
मेरो अस्वीकरण: म them मकको स्वामित्व लिन्छु यदि मैले उनीहरूलाई सँभाल्न सक्छु भने। 😉
जनवरी 10, 2007 मा 8: 49 एएम
सत्य म्याक N00b जस्तो बोल्दछ। त्यहाँ डग गर्नुहोस्…। तिमीले पाउनेछौ।
के तपाईं त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न जसले सधैं मलाई भन्नुहुन्थ्यो जब तपाईं केहि खरीद गर्नुभयो ...? “हो…। तर यो राम्रो छ। "
तपाईंले सुपर-डुपर भने
जनवरी 10, 2007 मा 9: 17 एएम
🙂 हो - हामी Applefans सधैं रक्षा मा हुन्छौं on
एप्पल केवल आफ्नो hype मा धेरै राम्रो छन्। मुख्य भनाइ हेर्दा, म जहिले पनि "अब खरीद गर्नुहोस्" बटन थिच्न प्रलोभित हुन्छ। 'भाग्यवस', यद्यपि उत्पादनहरू पछि युरोपमा आउनेछन् (र पछि नर्वे पनि) युएस भन्दा, त्यसैले म सँधै "सामान्य" प्रयोगकर्ताहरूबाट केही वास्तविक जीवनका अनुभवहरू पढ्न सक्छु।
AppleTalk मा "क्रान्तिकारी" को अर्थ "यसले कार्य गर्दछ"। दुःखको कुरा, त्यो उद्योग मानक होईन ...
मलाई फेरि, आशा छ कि म एक ब्ल्ग स्टालकर मा बदलिन छैन 😉
भर्खर आईफोनको लागि मुख्य प्रस्तुतीकरण हेर्नुहोस्, र यस्तो देखिन्छ कि फोनले वेब ब्राउजिing मात्र सम्भव बनाउँदैन (प्रायः जसो फोनहरू अहिले गर्छ), तर वास्तवमै रमाइलो छ। समान यसको सुविधाहरूको लागि जान्छ।
पछि मलाई के हिट गरियो त्यो के थियो, हे, यो कुरा OSX चालु छ र डेस्कटप शक्ति हुनेछ - तर त्यहाँ एकल अनुप्रयोग थिएन कि प्रस्तुतीकरणको समयमा त्यो देखाउन। अर्को शब्दहरुमा: शिपिंग सम्मको महीनाहरु नयाँ hype को शून्य हुनेछैन 😉 Apple यसमा राम्रो छ।
मलाई याद छ जब आईपड पहिलो पटक आयो, धेरै geeks यसको बारेमा आलोचनात्मक थियो। मलाई एउटा भनेको याद छ "ठीक छ, यो पोर्टेबल हार्डडिस्क छ, त्यसोभए के?" र आज तिनीहरूसँग बजार छ।
फोन बजारमा तिनीहरू ढिला प्रविष्टि हुन्, तर तिनीहरू प्रयोगशक्तिमा बलियो छन्, र उनीहरूको संयुक्त राज्य अमेरिकामा धेरै राम्रो वितरण नेटवर्क हुनेछ। त्यसोभए, २०० 1 मा १% मार्केट शेयर पहुँचभन्दा बाहिर हुनु हुँदैन।
रमाईलो समय 🙂
यहाँ एक रमाईलो लिंक छ जुन सामान्य मा प्रकाशित गर्न को लागी मतलब गर्न सक्दछ र विस्तार पनि ब्लगिंग द्वारा: http://www.buzzwordcompliant.net/index.php/2007/01/10/two-approaches-to-mobile-publishing/
र तपाईंले त्यो याद गर्नुहोला Yvonne फेरि जीवित बीचमा छ।
जनवरी 11, 2007 मा 10: 46 एएम
म सकारात्मक commatose छु
एप्पल प्रशंसकहरु अधिक प्राप्त गर्न आवश्यक छ
सेप्टेम्बर 2, 2008 मा 8: 08 AM
… Hindsight मा, तपाईं यो पोष्ट ise संशोधित गर्नुहुन्छ?
यस्तो देखिन्छ कि आईफोनको केहि खास प्रभाव भएको छ, र यसले निश्चित रूपमा इन्टरनेटको मेरो प्रयोग ढाँचा परिवर्तन गरेको छ।
पहिले मेरो स्वामित्वमा रहेको अन्य फोनहरू प्राधिकरणले यी प्रकार्यहरू गर्न सक्षम थिए, तर तिनीहरू बोझिल, जटिल र ढिलो थिए।
सेप्टेम्बर 2, 2008 मा 8: 49 AM
म निश्चित छु, Foo। बजार शेयर र लोकप्रियता एप्पल को पंथ दिएर आश्चर्य छैन। कार्यक्षमता एक चरण अप हो, राम्रो प्रदर्शन प्रतिक्रियाको साथ प्रदर्शन, एक उत्तम रिजोलुसन… साथ साथै एक अनुप्रयोग स्टोर (मूल होइन)। मलाई लाग्छ कि तिनीहरूले निश्चित रूपमा पट्टी खडा गरे - तर म अझै 'शान्त' कारक भन्दा बाहिर देखिरहेको छैन।
नराम्रो पक्षमा, आईफोन अझै पनि स्पर्श उपयोगिताको लागि कमजोर अंकहरू प्राप्त गर्दछ (तपाईंले यसलाई प्रयोग गर्नका लागि हेर्नुपर्दछ, सामान्यतया दुई हातले) र त्यहाँ धेरै हिचिकहरू छन् - मार् स्विच सहित, अक्षम टेथरिंग (यसलाई इन्टरनेटको रूपमा प्रयोग गरेर) तपाईंको ल्यापटपको लागि कनेक्ट),3जी मुनिको कम गरिएको क्वालिटी, र अधिक।
पाइपको तल आउनु भनेको अझ चाखलाग्दो कुरा हो - आईफोन पोर्टेबल गेमि con कन्सोलको साथ टाउकोमा जान्छ। त्यो बजार चेन्जर हुन सक्छ!
एन्ड्रोइड मोबाइल ओएस हो जुन यसमा मेरा आँखा छन्। खुला स्रोत फोन जुन कुनै पनि हार्डवेयरमा कुनै सीमितता बिना खोल्न सक्छ र खुला अनुप्रयोग स्टोर आईफोन पछाडि ठूलो छलांग हुन सक्छ।